Parkify - အဘယ်မှာရှိငါ့အကားတစ်စီးပါသလဲ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Parkify - အဘယ်မှာရှိငါ့အကားတစ်စီးပါသလဲ
Parkify - အဘယ်မှာရှိငါ့အကားတစ်စီးပါသလဲ APK ကို
သင်သည်သင်၏ကားကိုရပ်တဲ့အခါဒီရိုးရှင်းတဲ့ရိုးရှင်းသောကားတစ်စီး Locator ကိုအလိုအလျောက် detect ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအရေးယူမှုသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ကကတောင်းဆိုတဲ့!
ထိုသုံးပါ ဘလူးတုသ် သငျသညျရပ်သည့်အခါထိရောက်စွာ detect လုပ်ဖို့သင့်ကားများ၏ဆက်သွယ်မှု။ ရုံကွာသင့်ကားကနေလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တည်နေရာမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။ ချောမွေ့စွာ။ ထို့နောက်ရုံ app ကိုစစျဆေးနှင့်အပြန်မှရရန်လမ်းလျှောက်လမ်းညွန်လိုက်နာပါ။
သင့်ရဲ့ကားထဲတွင်အဘယ်သူမျှမကဘလူးတုသ်? မပူပါနဲ့! ကျနော်တို့ကိုသုံးပါ ရွေ့လျားမှု detection စနစ် သင်တစ်ဦးရွေ့လျားမော်တော်ယာဉ်ထဲကနင်းကြသောအခါသိရန်။ အဆိုပါ operating system ကိုအနိမ့်ကျထရီစားသုံးအာရုံခံကိရိယာများ, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမပိုဘက်ထရီယိုစီးသုံးပြီး, ဒီတာဝန်ခံပါ! တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ကားကိုစီးတဲ့အခါဒီအင်္ဂါရပ်လည်းအလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ သငျသညျဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိသောအခါသတိပေးချက်တစ်ခုရရှိရန်သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။
- သင်လိုအပ်သကဲ့သို့အများအပြားမော်တော်ကား Add!
- သင့်ကားများခြေရာခံ Keep သင်မျိုးစုံ devices များအသုံးပြုနေသည်လျှင်ပင် - သူတို့ရ ညှိ
- သင်တို့သည်လည်းပဲတာရှည်မြေပုံကိုအသာပုတ်ပါ, ကိုယ်တိုင်သင့်ကားရဲ့တည်နေရာကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်!
မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်မှုများမှမြေပုံ contrast နဲ့လမ်းညွန်!
Parkify - အဘယ်မှာရှိငါ့အကားတစ်စီးပါသလဲ